अनुभुति ः क्वारेन्टाइनमा न्युयोर्क ! •
अनुभुति ः क्वारेन्टाइनमा न्युयोर्क !
पोस्ट गरिएको मिति : चैत्र ११ - २०७६, मंगलवार
दिनेशजंग शाह । न्युयोर्क, अमेरिका
कारोना भाइरस (कोभिड १९) को अमेरिकी ईपिसेन्टर सेन्टर भनिएको न्युर्योक सिटीमा सन्नाटा छ । भागदौडको ‘न्युर्योक जिन्दगी’ टक्क अडिएझैं छ ।
अपरान्हको एक बजे । बिहानै देखिको अनलाईने कामलाई थाँती राख्दै सोफामा पल्टिरहेको थिएँ । फोनको रिङ बज्यो । उठाउनु पर्ने । टक्क अडिएँ म । भर्खरै धोएको हातले कसरी समाप्ने फोन ? दिमागमा उही भाइरसको कुरो चल्यो । सोचें, पहिले ‘ह्यान्डसेनेटाईजर’ ले फोनलाई पुछनु र्पयो । कल मिस भईहाल्यो । एकै छिनमा फोन फर्काएँ । चीरपरिचित मित्रले अनुरोध गरे, ‘एकछिन ज्याक्सन हाइटमा आउनुस् । एउटा सानो सहयोग गर्नु र्पयो ।’
मनमा दुविधा भयो । कोरोनोको त्रास एकातिर छ । अर्को्तिर सहयोगी मित्रको आग्रह । मित्रलाई एकमुष्ट ठूलै रकम नेपाल पठाउनु पर्ने रहेछ । कानूनतः उनी एक्लैले त्यत्रो रकम पठाउन नसक्ने भएको स्थितिमा म जानुपर्ने भयो ।
गुगल टाईमसिटमा लन्च ब्रेक लिएँ । हातमा पन्जा अनि मुखमा मास्क लगाएर, निस्किए मँ । बाटोमा थोरै अरु मास्कधारी पनि देखिए । बाटो काट्दा, सडकपेटीमा ती अपरिचितहरुसँग केही दूरि राख्नैर्पयो । नजिकिँदा श्वासप्रश्वासलाई रोक्दै ज्याक्सन हाइट पुगे ।
केही गन्थनपछि मनी ट्रान्सफर सर्भिसतिर लाग्यौं । ढोकानिर पुगेपछि म फेरि हच्किएँ । पन्जा लगाए पनि, बेकारमा कतिले समातेको ढोका के समात्नु भन्ने लाग्यो । मित्रले ज्याकेटको बाहुलालाई तल सार्दै, ढोका खोले । फिस्स हाँस्दै भने, ‘यस्तो गर्नैर्पयो ।’ गोली रोक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको सिसाको काउन्टरभित्र मास्क लगाएकी एक नेपाली कर्मचारी थिइन् । उनले टेबलमा रहेको ‘हेनेसेन्टाईजर’ को बोत्तल देखाउँदै भनिन्, ‘पैसा गन्नुअघि हातमा ‘सेन्टाईजर’लगाउनुस् है । के थाहा, तपाईले ल्याएको नोटमा पो छ कि कोरोना भाइरस ?’ उनको शंका अहिलको स्थितिको जायज उपज थियो ।
दैनिकी यसरी नै चलिरहेको छ । सबैतिर शंका, सबैलाई शंका । आफ्नो घरमात्र होइन, आफ्नै लुगा र शरीरमाथि समेत शंका । यसो सोच्यो भने अहिले हामीलाई बचाउने यही डर र शंकाले त हो ! कान्तिपुरबाट साभार